လက်ထပ်ဖို့ထိ မဆုံးဖြတ်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့် (၁၅) ချက် – Messi Club
လက်ထပ်ဖို့ထိ မဆုံးဖြတ်သင့်တဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့် (၁၅) ချက်
အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် အချစ်ဟာအရေးအပါဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော်လည်း ဦးနှောက်ကအခန်းကဏ္ဍကိုတော့ မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ နှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းရွေးချယ်လိုက်ပေမယ့် ရွေးချယ်မှုမှားယွင်းတဲ့အခါ ……
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ပြဿနာများစွာကို ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ့်။ ဒါကြောင့် သင့်အတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့အကျင့်စရိုက် (၁၅)ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်တတ်သူ
သင်အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့အခါ တာဝန်ယူမှုတွေဟာ အရမ်းကိုကြီးလာပါပြီ။ တကယ်လို့သာ သင့်ရဲ့ခင်ပွန်းက သင့်ကိုဂရုမစိုက်ပဲ သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသာ အာရုံစိုက်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအရာတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ သင်ထင်ပါသလဲ?
သင့်ရဲ့ဘေးနားမှာပဲ တောက်တဲ့လိုအမြဲတမ်းကပ်နေမယ့် သူမျိုးကိုလည်း ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ personal space လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်နယ်ပယ်လေးတစ်ခု ရှိဖို့လိုအပ်တာကြောင့် အမြဲတမ်းလိုက်ကပ်နေတတ်ရင်လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။
၃။ ကြမ်းတမ်းပြီး ရိုင်းစိုင်းသူ
သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က သင့်ကိုလေးစားမှုမထားပဲ ကြမ်းတမ်းစွာပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သူ၊ ရိုင်းစိုင်းတတ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ စောစောစီးစီးလမ်းခွဲလိုက်တာ ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကြာလာတာနဲ့အမျှ သင့်အတွက်ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နစ်နာမှုတွေကြုံတွေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က ဆေးလိပ်ကိုအလွန်အကျွံသောက်တတ်သူတစ်ယောက်ဆိုပါက သင်လည်းကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တာကြောင့် ဆေးလိပ်နဲ့ သင် ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲလို့ မေးလိုက်ပါ။
ဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့သာ အရမ်းချစ်ကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့သာလျှင်ပြည့်စုံသူတွေလို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့တွေဟာ သင်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက် မပြည့်စုံတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြောင်း သင်ဖက်ကသိနေသင့်ပါတယ်။
သင်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကတောက်ကဆဖြစ်သမျှကို မမေ့တတ်ပဲ အမှတ်ရနေတတ်ရင် ဒါဟာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ငြိုးထားတတ်ခြင်းဟာ ပြဿနာတွေကို မွေးမြူခြင်းဖြစ်တာကြောင့် လက်တွဲဖို့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ခါတစ်လေ ကတိပျက်တာဟာ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုကတိပျက်မှုတွေဟာ မကြာခဏဖြစ်နေတတ်ပြီး သင့်စိတ်ခံစားချက်တွေကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာရင်တော့ သိပ်မကောင်းတော့ပါဘူး။
တကယ်လို့ သူဟာတစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် ဖောက်ပြန်တတ်တာနဲ့ နောက်ထပ်ထပ်လုပ်ဖို့ ၀န်မလေးတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလိုဖောက်ပြန်တတ်သူတွေကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
၉။ စိတ်သဘောထား ကျဉ်းမြောင်းသူ
ယခုလိုခေတ်ကာလမှာ သင်ဘာဝတ်ဝတ် ဘယ်သွားသွား အမြင်ကျဉ်မြောင်းစွာ ပိတ်ပင်တတ်ရင် သင့်အတွက်အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ရှိသင့်ပါတယ်။
၁၀။ မရင့်ကျက်၊ မပြတ်သားသူ
မရင့်ကျက်ခြင်းဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ မရင့်ကျက်၊ မပြတ်သားခြင်းဟာ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။
၁၁။ သင့်တို့ရဲ့အချစ်ရေးကို လေးလေးနက်နက်မထားတတ်သူ
သင်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို မလေးမထားပဲပေါ့ပျက်ပျက် နေတတ်သူနဲ့ တစ်မိနစ်တောင်မှ သင်အတူမနေသင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စောစောစီးစီးလမ်းခွဲလိုက်တာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
၁၂ တိရိစ္ဆာန်တွေကို မုန်းတီးသူ
တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို မုန်းတီးတဲ့အမျိုးသားတွေဟာ နှလုံးသားမရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ထပ်ဖို့အထိ စဉ်းစားတဲ့အခါ ယခုအချက်ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
၁၃။ သင့်အပေါ်ပဲ မှီခိုတတ်သူ
သင်လက်ထပ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသားဟာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချတတ်ပဲ အရာရာသင့်အပေါ်မှာပဲ မှီခိုတတ်ခြင်းဟာ သင့်အတွက်နောင်တရစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကိုရဲရင့်လာအောင် ကြိုးစားပါ။ တကယ်လို့သူက လက်မခံရင်တော့ လမ်းခွဲလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
သင့်ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်လာမယ့်သူဟာ အရာရာကိုတာဝန်ယူလိုစိတ်မရှိပဲ ဆင်ခြေပေးတတ်သူဆိုပါက သင့်အတွက်စိတ်အနှောက်အယှက် အမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် သင်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ မယုံကြည်မှုတွေ တိုးလာတတ်ပါတယ်။
၁၅။ သင့်ရဲ့ အမြင်တွေကို လစ်လျူရှုတတ်သူ
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က သင့်ရဲ့အတွေး၊ အမြင်တွေကို ဂရုမစိုက်တတ်ပဲ အမြဲတမ်းဂရုမစိုက်တတ်သူဆိုပါက သူနဲ့အဝေးဆုံးမှာနေဖို့ စတင်စဉ်းစားရတော့မယ့် အချိန်ပါပဲ။LM_Naung_Naung / Ref-gottadorightthing / Lifestyle_Myanmar
အိမျထောငျတဈခုတညျဆောကျဖို့အတှကျ အခဈြဟာအရေးအပါဆုံး အစိတျအပိုငျးဖွဈသျောလညျး ဦးနှောကျကအခနျးကဏ်ဍကိုတော့ မထေ့ားလို့မရပါဘူး။ နှလုံးသားရဲ့ဆန်ဒအတိုငျးရှေးခယျြလိုကျပမေယျ့ ရှေးခယျြမှုမှားယှငျးတဲ့အခါ ……
ဘဝတဈလြှောကျလုံး ပွဿနာမြားစှာကို ရငျဆိုငျရပါလိမျ့မယျ့။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အတှကျအနှောကျအယှကျဖွဈစနေိုငျတဲ့ ယောကျြားလေးတဈယောကျရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့အကငျြ့စရိုကျ (၁၅)ခကျြကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ သူ့ရဲ့အလုပျကိုပဲ အာရုံစိုကျတတျသူ
သငျအိမျထောငျပွုပွီးတဲ့အခါ တာဝနျယူမှုတှဟော အရမျးကိုကွီးလာပါပွီ။ တကယျလို့သာ သငျ့ရဲ့ခငျပှနျးက သငျ့ကိုဂရုမစိုကျပဲ သူ့ရဲ့အလုပျကိုသာ အာရုံစိုကျနမေယျဆိုရငျ ဘယျလိုအရာတှေ ဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ သငျထငျပါသလဲ?
သငျ့ရဲ့ဘေးနားမှာပဲ တောကျတဲ့လိုအမွဲတမျးကပျနမေယျ့ သူမြိုးကိုလညျး ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။ လူတိုငျးဟာ personal space လို့ချေါတဲ့ ကိုယျပိုငျနယျပယျလေးတဈခု ရှိဖို့လိုအပျတာကွောငျ့ အမွဲတမျးလိုကျကပျနတေတျရငျလညျး အဆငျမပွပေါဘူး။
၃။ ကွမျးတမျးပွီး ရိုငျးစိုငျးသူ
သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောက သငျ့ကိုလေးစားမှုမထားပဲ ကွမျးတမျးစှာပွောဆိုဆကျဆံတတျသူ၊ ရိုငျးစိုငျးတတျသူတဈယောကျဆိုရငျတော့ စောစောစီးစီးလမျးခှဲလိုကျတာ ပိုကောငျးမယျလို့ထငျပါတယျ။ ကွာလာတာနဲ့အမြှ သငျ့အတှကျရုပျပိုငျးစိတျပိုငျးဆိုငျရာ နဈနာမှုတှကွေုံတှလေ့ာနိုငျပါလိမျ့မယျ။
သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောက ဆေးလိပျကိုအလှနျအကြှံသောကျတတျသူတဈယောကျဆိုပါက သငျလညျးကနျြးမာရေးထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ ဆေးလိပျသောကျခွငျးဟာ နှဈဦးစလုံးအတှကျ မကောငျးတဲ့အရာဖွဈတာကွောငျ့ ဆေးလိပျနဲ့ သငျ ဘယျဟာကိုရှေးမလဲလို့ မေးလိုကျပါ။
ဒီလိုလူမြိုးတှကေတော့ သူတို့ကိုယျသူတို့သာ အရမျးခဈြကွသူတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူတို့သာလြှငျပွညျ့စုံသူတှလေို့ ထငျကွပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ သူတို့တှဟော သငျနဲ့အိမျထောငျပွုဖို့အတှကျ မပွညျ့စုံတဲ့သူတှေ ဖွဈကွောငျး သငျဖကျကသိနသေငျ့ပါတယျ။
သငျနဲ့အဆငျမပွတေဲ့ အခြိနျတှမှော ကတောကျကဆဖွဈသမြှကို မမတေ့တျပဲ အမှတျရနတေတျရငျ ဒါဟာမကောငျးတဲ့လက်ခဏာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ရနျငွိုးထားတတျခွငျးဟာ ပွဿနာတှကေို မှေးမွူခွငျးဖွဈတာကွောငျ့ လကျတှဲဖို့ အဆငျပွမှောမဟုတျပါဘူး။
တဈခါတဈလေ ကတိပကျြတာဟာ ကိစ်စမရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုကတိပကျြမှုတှဟော မကွာခဏဖွဈနတေတျပွီး သငျ့စိတျခံစားခကျြတှကေို အနှောကျအယှကျဖွဈလာရငျတော့ သိပျမကောငျးတော့ပါဘူး။
တကယျလို့ သူဟာတဈကွိမျတဈခါလောကျ ဖောကျပွနျတတျတာနဲ့ နောကျထပျထပျလုပျဖို့ ဝနျမလေးတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုဖောကျပွနျတတျသူတှကေို ရှောငျကဉျြပါ။
၉။ စိတျသဘောထား ကဉျြးမွောငျးသူ
ယခုလိုခတျေကာလမှာ သငျဘာဝတျဝတျ ဘယျသှားသှား အမွငျကဉျြမွောငျးစှာ ပိတျပငျတတျရငျ သငျ့အတှကျအဆငျပွမှော မဟုတျပါဘူး။ လူတိုငျးမှာ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြ ရှိသငျ့ပါတယျ။
၁၀။ မရငျ့ကကျြ၊ မပွတျသားသူ
မရငျ့ကကျြခွငျးဟာ တဈခါတဈရံမှာ ခဈြစရာကောငျးတယျလို့ ထငျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိမျထောငျရေးမှာတော့ မရငျ့ကကျြ၊ မပွတျသားခွငျးဟာ ခငျပှနျးကောငျးတဈယောကျရဲ့ အရညျအခငျြးတှမေဟုတျပါဘူး။
၁၁။ သငျ့တို့ရဲ့အခဈြရေးကို လေးလေးနကျနကျမထားတတျသူ
သငျတို့ရဲ့ ဆကျဆံရေးကို မလေးမထားပဲပေါ့ပကျြပကျြ နတေတျသူနဲ့ တဈမိနဈတောငျမှ သငျအတူမနသေငျ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ စောစောစီးစီးလမျးခှဲလိုကျတာ ပိုကောငျးပါလိမျ့မယျ။
၁၂။ တိရိစ်ဆာနျတှကေို မုနျးတီးသူ
တိရိစ်ဆာနျလေးတှကေို မုနျးတီးတဲ့အမြိုးသားတှဟော နှလုံးသားမရှိတဲ့သူတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လကျထပျဖို့အထိ စဉျးစားတဲ့အခါ ယခုအခကျြကိုပါ ထညျ့သှငျးစဉျးစားသငျ့ပါတယျ။
၁၃။ သငျ့အပျေါပဲ မှီခိုတတျသူ
သငျလကျထပျလိုကျတဲ့ အမြိုးသားဟာ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြမခတြတျပဲ အရာရာသငျ့အပျေါမှာပဲ မှီခိုတတျခွငျးဟာ သငျ့အတှကျနောငျတရစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူ့ကိုရဲရငျ့လာအောငျ ကွိုးစားပါ။ တကယျလို့သူက လကျမခံရငျတော့ လမျးခှဲလိုကျတာအကောငျးဆုံးပါပဲ။
သငျ့ရဲ့ခငျပှနျးဖွဈလာမယျ့သူဟာ အရာရာကိုတာဝနျယူလိုစိတျမရှိပဲ ဆငျခွပေေးတတျသူဆိုပါက သငျ့အတှကျစိတျအနှောကျအယှကျ အမွဲတမျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ သငျတို့ရဲ့အိမျထောငျရေးမှာတော့ မယုံကွညျမှုတှေ တိုးလာတတျပါတယျ။
၁၅။ သငျ့ရဲ့ အမွငျတှကေို လဈလြူရှုတတျသူ
တကယျလို့ သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောက သငျ့ရဲ့အတှေး၊ အမွငျတှကေို ဂရုမစိုကျတတျပဲ အမွဲတမျးဂရုမစိုကျတတျသူဆိုပါက သူနဲ့အဝေးဆုံးမှာနဖေို့ စတငျစဉျးစားရတော့မယျ့ အခြိနျပါပဲ။LM_Naung_Naung / Ref-gottadorightthing / Lifestyle_Myanmar